Date My Pet » 3 Tips kukuita Akakwana Chick Magnet!
Kune varume vanoita zvachose, asi vachiri anopedzisira vakupe hadzi pfungwa kupfuura ivo chaizvoizvo vanogona kubata. Kune vamwe vanoedza nepavanogona zvinhu kuva mukadzi wacho murume, asi vanotamburira kuti Woo kunyange mukadzi chete. Pazasi pane mazano varume kuva muchikwata wechipiri; mazano anotevera aya achakubatsira kunzwisisa chii chaizvo vanhu vaite kuva chicks magineti.
Dzidza sei kuti ziso kuonana
Kana usiri munhu wechisikigo chicks magineti, haugoni kutarisira kuona peya ose nameso ndakuteverai. saka, sezvo pamunopinda mumba akazadzwa boka revanhu, unofanira kutanga tarisei kuti uzive zvakadini kutanga dzinongoitika nzeve yauri kuwana.
Havaedzi kuita chinhu mano kubata vamwe’ nzeve; yeuka muri pano kukiya anonyatsomutarisisa nevakadzi vakanaka uye kwete kupa uri chigure. Paunenge atarise kamuri, unofanira kuwana kanenge imwe pati kufarira iwe; kana ukaona naye vachisimudza tsiye dzake uye kunyemwerera iwe, kupindura achinyemwerera uye edza kusvika naye kuti kukurukurirana nevamwe mhando.
Uri kushamisika chii kana musingadi kuwana munhu nokukiya ako anopenya kana kunyemwerera iwe? Ndicho kungasaitika kana ukaenda kuti anononoka chakayerwa Ongororo. vakadzi Most (kunyanya vaya vanowana vanhu vatovapo mukamuri kuchifinha) rambai makatarira kumativi nomuzvarirwo kuti azive kana munhu akarurama akapinda mumba wakafanira zvakakwana; saka, zvishoma Ongororo kuchaita kuti ziso kuonana zvinenge mumwe wavo.
Izvi uye dzikaedzwa nzira; guru mukadzi mhondi munyika kuzviita uye kuwana zvibereko zvikuru. Kuti vawane hadzi kutarisirwa, uchava kudzidza nehanya navo. Semuyenzaniso, kana uchida zvikuru anokwezva mukadzi boka zvina kana zvishanu kuratidza kufarira mauri, chete kufamba kuboka uye kutaura zvose vasikana kunze chete uchida kunyengedza.
Women, pasinei anokwezva kana chivimbo vava, chete vanovenga kungosiyiwa. Achivapa razero pfungwa zvinoreva Vachabva vatanga kuita zvinhu kuhwina kuonga kwako.
Iva wakagadzirira kubvunza mibvunzo
Kana ukasangana mukadzi kekutanga, pane kutaura nezvako, bvunza mibvunzo yake. Women pasinei nezera ravo, zvedzidzo avakaita uye basa chete vanoda kutaura pachavo. saka, Ivo chete vanoda chokwadi apo vanosangana mumwe munhu mutereri akanaka; Kazhinji chicks magnets A ndiyo yakanakisisa vateereri munyika.
Bvunza pamusoro wake zvinhu, kurota kwake, uye upenyu hwake yose; iye achava kutaura, hurukuro yaiti. Iva nechokwadi Unoteerera chero iye ari kutaura nokungwarira sezvo zvingava kunyadzisa kana anobvunza kuti zano uye haukwanisi kupa pawakanga chaizvoizvo asina kuteerera kwaari.
Mazano pamusoro apa anoratidza kuti kuva chicks magineti munhu anofanira kuita zvinopfuura kungova kutarira uye hwema zvakanaka. Kuti vawane hadzi kutarisirwa vakomana vanofanira kutanga kuva vanonyengera nounhu; vose nohumwe unhu kuuya chinotevera.
pamusoro 10 Tips nokuti Kunobudirira Dating